BLACKJET VX-1r ကို USB 3.1 GEN ATECH လျှပ်တစ်ပြက်မီးနည်းပညာအားဖြင့်2အနီရောင် mini-MAG Reader ကို - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » ATECH လျှပ်တစ်ပြက်မီးနည်းပညာအားဖြင့် BLACKJET VX-1r ကို USB 3.1 GEN2အနီရောင် mini-MAG Reader ကို
ATECH လျှပ်တစ်ပြက်မီးနည်းပညာအားဖြင့် BLACKJET VX-1r ကို USB 3.1 GEN2အနီရောင် mini-MAG Reader ကို
Atech Flash ကိုနည်းပညာ စက်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာကဒ်စာဖတ်သူများနှင့်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်များ (AFT) ထုတ်လုပ်သူပုအမည်ရှိ၎င်းတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်မီဒီယာစာဖတ်သူကိုစတင်ပါလိမ့်မည် Blackjet ™ VX-1R အနီရောင် mini-MAG® Reader ကို.
Blackjet VX-1R သငျသညျ, ပြင်ဆင်ရန်သုံးစွဲနှင့်၎င်းတို့၏အများဆုံးအမြန်နှုန်းမှာသင့်မီဒီယာကတ်များမှသင်၏ဖန်တီးမှုအကြောင်းအရာမော်ကွန်းတင်ခွင့်ပြုရာက USB 1,000 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 3.1 ၏ပိုကြီးတဲ့ bandwidth ကို2ကို MB / s ကိုအသုံးချ။ Blackjet VX-1R ကတည်ဆဲMac®နှင့်Windows® Thunderbolt ™3ကွန်ပျူတာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက် USB-C အ interface ကိုအသုံးချ။​
အဆိုပါ Blackjet VX-1R $ 174.99 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးအကြံပြုထားသော MSRP ရှိသည်လိမ့်မယ်နှင့်ဒီဇင်ဘာလ 17th တင်ပို့ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အနီရောင်အနီရောင် mini-MAG ဘို့ Reader ကို Approved
USB မှတ် 3.1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး210Gbps အထိအမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေး
ပြောင်းပြန်မှာ USB Type-C ကို connector ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်
* 525 ကို MB / s အထိအမြန်နှုန်းနှင့်အတူရိုက်ကူးစားသုံးမိပါ
Thunderbolt ™3နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့
အေျကာင္းအရာ Atech Flash ကိုနည်းပညာ (www.atechflash.com)
Atech Flash ကိုနည်းပညာ Inc ကို (AFT) ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့် USB နဲ့ Thunderbolt ထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 15 နှစျကျြော AFT, RAID သိုလှောင်မှုစနစ်များ, လိုလားသူ docking စနစ်များ, ကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်လည်း PCIe တိုးချဲ့ကတ်များပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာကဒ်စာဖတ်သူများထံမှအထိပြည့်စုံဖြေရှင်းနည်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ AFT ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စတိုင်နှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ AFT လည်းကုမ္ပဏီအများအပြားအဘို့အကာ OEM / လိမ္မော်ရောင်ဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။
* USB မှတ် 3.1 ဗိုလ်ချုပ်ကြီး2သတ်မှတ်ချက်များအပေါ်အခြေခံပြီး; စွမ်းဆောင်ရည်ကဒ်အမျိုးအစားနှင့်အိမ်ရှင် system ပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြားလိမ့်မည်။
Blackjet ™၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် Atech Flash ကိုနည်းပညာ, Inc
အနီရောင် mini-MAG ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည် RED.COM, LLC
Thunderbolt နှင့် Thunderbolt လိုဂို၏အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Intel က အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိကော်ပိုရေးရှင်း။
Intel က နှင့် Intel က လိုဂို၏အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Intel က အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိကော်ပိုရေးရှင်း။
ယခင်: Boothbay ဒေသကြီးအဝန်းရုပ်မြင်သံကြား Cablecast အဝန်းမီဒီယာပလက်ဖောင်းနှင့်အတူတိုက်ရိုက်လွှမှတစ်ဆင့်အတွင်းသဘော Reignites
နောက်တစ်ခု: 5G-SDI နှင့်အတူ Aja သင်္ဘော KONA 12 I / O
ရေဒီယို Pros ပြီးတော့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအမှုဆောင်အရာရှိရေဒီယို၏အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ရန် 2019 ရေဒီယိုပြရန်မှာစုဝေး